Dunida ruuxiga, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Waxaan u aragnaa in adduunkeenu yahay mid jireed, qalab, saddex-cabbir. Waxaan ku aragnaa shanta dareen ee taabashada, dhadhanka, aragga, urinta iyo maqalka. Iyadoo la adeegsanayo dareemahan iyo aaladaha farsamada ee aan ugu talagalnay inaan ku xoojino, waxaan sahamin karnaa adduunka jireed oo aan u adeegsan karnaa suurtagal ahaantiisa. Wuxuu aadanaha u keenay meel fog, maanta in ka badan sidii hore. Guulihii sayniska ee casriga ahaa, guulaheena xagga teknoolojiyadda waxay caddeyn u yihiin inaan fahamno adduunka jir ahaan, furno oo aan uga faa'iideysanno. Adduun ruuxi ah - haddii ay jirto - waa inuu jiraa wax ka baxsan cabbir ahaanta jirka. Lama aqbali karo oo waa lagu cabbiri karaa dareenka jirka. Waa inay noqotaa adduun aan muuqalkiisa caadiyan la arki karin, la dareemin, la ururin karin, la dhadhamin karin oo la maqlin. Hadday jirto, waa inay ka baxsan tahay waaya-aragnimada aadanaha ee caadiga ah. Marka: adduun caynkaas ahi ma jiraa?
Horaantii, waqtiyo aad u yar, dadku dhib kuma qabin inay rumaystaan ​​awoodaha aan la arki karin iyo waxyaabaha ka sarreeya. Quruxleydu waxay ku dhex yaalliin beerta, mucjisooyinka iyo geesaha kaynta dhexdeeda, cirfiidka guryaha la faaruqiyo. Geed walba, dhagaxaan iyo buuroba maskaxdoodu way lahayd. Qaarkood waxay ahaayeen kuwo wanaagsan oo caawiya, qaar si xun u silicsan, qaar qaar si xun u sharraxan. Dambiilayaashu aad bay ula socdaan awoodahan aan la arki karin waxayna aad uga taxadari jireen inaadan u quudhsan ama caayaan. Laakiin markaa aqoonta adduunka ee dunidu way kortay, oo saynisyahannadu waxay ina tuseen in ciidamada dabiiciga ahi adduunka xukumaan. Wax walba waa la sharixi karaa iyagoon u adeegsanin awood ka sarraysa. Si kasta oo ay ahaataba, saynisyahannadu waxay rumeeysteen taas si wada jir ah. Maanta qaar hadda sidaa ma hubo. Inta ay saynisyahannadu sii ballaadhiyeen xuduudaha aqoonta dhinac kasta, ayay u sii muuqatay in aan wax walba lagu sharxi karin xoogagga dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ah.
Markii aan la xiriirno adduunka ka sarreeya, waxaan xiriir la leenahay xoog awood leh, oo kaliya maahan kuwo faa'iido leh. Quusashada, dhiirrigelinta, xitaa kuwa si fudud wax u ogaanaya ayaa si dhaqso leh u geli kara dhibaato. Maaha inaad dalkaan ka dhex gasho bilaa hagis fiican. Wax badan ayaa la daabacay oo ku saabsan tan ilaa maanta. Qaarkood waa cambaareyn iyo hadal xanaf, qaarna waa shaqadii chalayaashu kuwa ka faa iideysanaya cabsida laga qabo gulufka iyo jahliga. Laakiin waxa kale oo jira dad badan oo daacad ah oo macno leh oo na siiya hagitaan adduunka xagga ruuxa.
Hagahayagu waa inuu ahaadaa Kitaabka Quduuska ah. Waa waxyiga Ilaah ee dadka. Wuxuu noo sheegayaa waxa aannan aqoonsan karin ama aan si buuxda u fahmi karin shanta dareen. Waa buugga tilmaamaha uu Eebbe abuuray bani-aadmigiisa. Taasi waa sababta ay u tahay badbaado, halbeeg la isku halleyn karo iyo "buugga tixraaca" wax kasta oo aan u baahan nahay inaan ogaano oo ku saabsan xoogagga, awoodaha iyo saameynta ka baxsan khibradeena dabiiciga ah.
Qoraalka qoraalka ah ee "ruuxa dunidan"